esibukweni aluminium ishidi - China Hongbao Aluminium Imboni
Mirror aluminium ophucuziwe ishidi Ingxubevange: 1050,1060,1070,1085,1100,3003,3005,5005,5083,8011
Bomoya: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26
1. Standard ikufanelekela ukuhamba olwandle ukuthekelisa nokupakisha, Pallets sokhuni noma izimo esenziwe ngokhuni kraft iphepha;
2. omunye iphakethe ca kwenziwe okusekelwe nezidingo amaklayenti.
3. Iphakheji enamandla kakhulu.
Delivery ngokuningiliziwe: Phakathi nezinsuku ezingu-30
esibukweni aluminium ophucuziwe ishidi isicelo
1) Ngaphezu kwalokho okwenza isitsha. 2) Solar Boneka ifilimu
3) Ukuvela kwamaqabunga isakhiwo
4) Interior ubuciko: Uphahla lwangaphakathi, izindonga, njll.
5) Ifenisha amakhabethe
7) Izimpawu, nameplate, izikhwama okwenza.
8) ehlotshisiwe ngaphakathi nangaphandle imoto
9) yaseNdlunkulu zikagesi: amafriji, microwave Ohhavini, imishini elalelwayo, njll.
10) electronics umthengi: omakhalekhukhwini, amakhamera digital, MP3, U disk, njll.
11) LED Light, ithunzi lelambu, diffuser noma Fluorescent isibani
esibukweni aluminium ophucuziwe Ishidi ukubukeka zemvelo aluminium njengoba livela esigayweni rolling. Esibukweni ophucuziwe imikhiqizo aluminium ishidi Hongbao zenzelwe ukusizakala izici metal sika eziningi eziyingqayizivele, kuhlanganise ukuminyana ongaphakeme nesisindo ekukhanyeni, reflectivity okusezingeni eliphezulu, conductivity ezinhle, UV nelanga ukumelana ukukhanya, ukumelana sezulu, kuyaqina okusezingeni eliphezulu namandla ezehlukile.
(1) 1070 esibukweni ophucuziwe aluminium ishidi
Bomoya: H24, H18
Surface: siphela Bright
kuveza obuphelele 86% kuveza ehlasela umzimba ≤12%
amandla Amaphaphu 125N / mm
amandla Ukuhoxa 105N / mm2
(2) 1085 esibukweni aluminium ophucuziwe ishidi
Aluminium - Idatha yobuchwepheshe
umkhiqizo Uhlobo Reflectance obuphelele Specular
Reflectance Ekubhebhetselisa Reflectance
Scale 1-4 ingxubevange
(ubulukhuni) Min Amandla eqine
MPA Min Vield Amandla
5036-3 60 ° eside 60 ° trans
ejwayelekile 86 86 80 77 15 1 Al 99,85 H18 125 105 2
Mirror aluminium ophucuziwe shidi kabanzi Ukukhanyisa, Ukuhlobisa, Architecture, Umthengi Electronics.Hongbao Aluminium njalo igxile ekuletheni anodized aluminium elisetshenziswa ukukhanyisa ubuchwepheshe ensimini. Eminyakeni edlule, siye ukuqongelela imali eningi nakho ukukhanyisa.
(1) Ukukhanya Mirror iphucuziwe aluminium ishidi
Namuhla aluminium kuyinto metal imfashini kakhulu, asetshenziswa kabanzi kuzo zonke ensimini. Ngenxa zako ka ukugqwala ukumelana, amandla mechanical plasticity kakhulu, aluminium kufanelekile ukuthi kusetshenziswe ukucutshungulwa ahlukahlukene lokukhanda. Ngaphezu kwalokho, kakhulu yayo ukukhanya kuveza izakhiwo kanye ebusweni ukucutshungulwa ubuchwepheshe ukwenza aluminium esebenza zonke izinhlobo imishini ukukhanyisa.
The main isicelo izikophu imikhiqizo esetshenziswa ukukhanyisa zihlanganisa:
• izibani Outdoor
izibani • ngehele
• izibani LED kanye nezibani
• izibani Tri-ubufakazi
• izibani Umhubhe
Previous: hot ugingqe aluminium ishidi
Okulandelayo: stucco aluminium ishidi
7075 Aluminium Ishidi
Aluminium Ishidi Ikhoyili
Aluminium Ishidi Roll
Aluminium AmaSpredishithi For Sale